Muta ahia ubochi ma buru onye Pro | FullApril 2021 Nduzi
Etu ị ga-esi bụrụ onye ahịa ụbọchị na uru dị ka pro na 2021!
Ahịa ahịa na-abụbu ngalaba nke ụlọ ọrụ na-ere ihe, ụlọ ahịa, na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ. Suchlọ ọrụ ndị a bụ naanị ndị nwere ike ịnweta ozi ozugbo banyere otu ebuka na-arụ ụbọchị ahia.
Agbanyeghị, taa, site na mwepụta nke ịntanetị na azụmaahịa azụmaahịa weebụsaịtị, ọ dịịrị ndị ahịa ọ bụla mfe isonye na ngwa ahịa ụbọchị.
Akọwapụtara ụbọchị ahia dị ka usoro ịzụ na ire ihe akụ na otu ahia ụbọchị. A na-eme mgbanwe ahụ iji nweta uru site na ire ere ahụ. Dịka o doro anya, n'ịzụ ahịa ụbọchị, ị gaghị ejidesi ihe ike karịa otu ụbọchị.
Ma, mgbe mgbe, ndị ahịa na-emeghe ọnọdụ naanị maka awa ole na ole ma ọ bụ ọbụna nkeji. Ya mere, uru ahụ dabere na obere ọnụahịa dị iche iche ma na-emeziwanye ihe site na itinye ego.
Maka onye ọhụụ, ịnwa ịmụ ahịa ụbọchị nwere ike ịbụ obere nsogbu. Iji nyere gị aka ịghọta echiche ahụ nke ọma, anyị emeela usoro nduzi sara mbara banyere azụmaahịa ụbọchị ụbọchị yana otu ị ga - esi bido taa!
Mụta ahia ụbọchị - isi?
Iji mebie echiche a, ịzụ ahịa ụbọchị bụ ụdị itinye ego na-atụnye ego gụnyere gụnyere mmeghe na mmechi nke ọnọdụ ngwaahịa n'ime ụbọchị.
Ka anyị tụlee otu ihe atụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ n ’imepe azụmahịa ọhụrụ n’ elekere iri na otu nke ụtụtụ wee mechie ya n’elekere abụọ nke otu ụbọchị, yabụ, maka ebum n’uche na ebumnuche gị, i mechaala ahịa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị mechie otu ọnọdụ n'ụtụtụ echi ya, na tiori, ọ gaghị aza maka azụmaahịa ụbọchị.
Coulddị ahia a nwere ike ịtụle dị ka ihe dị iche na itinye ego na ngwaahịa. Kama ijide akụ dị ka ebuka na agbụ ruo ọtụtụ afọ, na nke a, ndị ahịa na-eleba anya n'inweta obere uru na obere oge.
N'ikwu ya, onye na-ere ahịa ụbọchị nwere ike itinye ọtụtụ narị azụmaahịa kwa ụbọchị. Maka onye nwere ego nwere ego, obere uru a nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa na atụmatụ ziri ezi. Ha na-eji nyocha oru oru na akuko ahia iji nweta uru na obere oge. Nke a na - agụnye iji oke iji mee ka ikike ịzụ ahịa na - azụ ahịa - nke dị oke mkpa mgbe ị tụlere obere elekere pasent.
Otu esi akwado maka ahia ubochi
Iji mụta ịzụ ahịa ụbọchị nke ọma, ịkwesịrị iji ihe ọmụma banyere otu ahịa si arụ ọrụ. E kwesịkwara inwe atụmatụ ga-enyere gị aka ikpebi otu esi ejikwa ego na akụkụ dị iche iche nke ịzụta na ire ihe.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa iburu n'uche na ọbụlagodi onye na-azụ ahịa n'oge ka oge ụfọdụ ga-enwe ọghọm n'ọhịa. Site na nke ahụ, ahụmịhe ha na ụlọ ọrụ ga-akwadebe ha iji merie nsonaazụ nke ọghọm dị otu a. Ọ bụ ezie na nke a bụ ebe ọhụụ na-esikarị ike.
Ka o sina dị, nzọụkwụ mbụ iji banye ebe a na-ere ahịa ụbọchị bụ ịchọta onye na-ere ahịa n'ịntanetị. Nke a ga - enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego iji zụọ ahịa. Nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla sitere na mmanụ, indices, gold, ebuka, ETFs, na, na nso nso a, cryptocurrencies.
Mgbe ị matara akụ ị chọrọ ịzụ, ọrụ ọzọ ị na-arụ bụ ịkọ nkọ maka ọdịnihu ọnụego ya. Ọ bụrụ n’ichepụta echiche ziri ezi, ị ga-enweta ego. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-achọta ụzọ iji buru ọghọm gị, ma mesịa, gafere na azụmaahịa gị ụbọchị ọzọ.
Uru nke ahia ụbọchị
Ọ bụrụ na ọ ga-aga nke ọma, enwere ike inweta nnukwu uru ego
Tonweta ọtụtụ puku ahịa
E nwere leverage iji ahia karịa ihe ị nwere na akaụntụ gị
Nhọrọ nke ogologo na mkpụmkpụ ahia
Ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ iji nweta ego n'ime onye na-ere ahịa
Tradingzụ ahịa na ngwa ngwa ngwa ngwa
Ihe to Ga-atụle
N’ụzọ dị oke mkpa, ịkwesịrị ịdị njikere iche ihu na ijikwa mmetụta mmetụta uche nke azụmahịa na-ezighi ezi.
Ofwa nke ahia ụbọchị na-aga ngwa ngwa, ọ na-achọkwa nghọta zuru oke banyere ahịa. Mana dịka ha na-ekwu, oge agafeebeghị ịmụ ụbọchị azụmaahịa - ọ bụ ya mere anyị ji chịkọta ntuziaka a zuru oke!
Isi ihe nke Day Trading
Tupu ịmalite iji ezigbo ego na-azụ ahịa ụbọchị, enwere ihe ole na ole ịkwesịrị ịnwe.
Ihe omimi miri emi banyere ahia ahia ahia na uzu oru
Usoro nke ị nwere ike iji, nke gosipụtara nke ọma
A ụbọchị ahia simulator na pụrụ inyere chọta gị a na-egosi nke profitability
N'akụkụ a, anyị ga-abanye nyocha zuru ezu banyere ihe ndị bụ isi ka ị wee nwee ike ịmụ ahịa ụbọchị niile.
Ogologo ahia vs. Short Trading
Na ọnọdụ ọdịnala, ị nwetara naanị otu nhọrọ - ị chere na mbak ụlọ ọrụ ga-abawanye uru ma tinye ego na ha. N'ụzọ dị otu a, ị nwere ike ree ma nata uru ya. Ya mere, mgbe ịzụrụ ngwaahịa iji ree ya mgbe e mesịrị na uru, a na-akpọ ya ogologo ahia.
Agbanyeghị, taa, enwere nhọrọ ọzọ ị ga-ebu ụzọ ree ihe onwunwe gị. Na ihe a na-akpọ "obere ahia," ị na-eche na akụ ga-adalata.
Dị ka ọmụmaatụ:
Ka anyị kwuo na ị chere na uru XYZ ga-ebelata n'ime awa ole na ole sochirinụ.
Open na-emeghe gị ahia site ịtụkwasị a na-ere iji. Ọ bụrụ na iresị 500 mbak XYZ, akaụntụ gị ga - egosiputa -500.
Ọ bụrụ n ’ịda mba 5%, mgbe ị zụtara ha, ị na-enweta uru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, akaụntụ gị ga-ka na-adịghị mma, na-asụgharị na ego furu efu.
Agbanyeghị, site na iji onye na-ere ahịa CFD achịkwa, ị nwere ike ịga mkpụmkpụ na ọtụtụ puku akụrụngwa ego na pịa bọtịnụ. Nke a bụ n'ihi na ngwa CFD na - eso naanị akụ - na - eme ka ọ dị mma maka ndị ahịa ụbọchị!
Dingzụ ahịa mkpụmkpụ
Dịka anyị kwuburu na mbụ, azụmaahịa ụbọchị bụ ụdị azụmaahịa na-anaghị adịte aka nke na-ahụkarị ka ndị na-etinye ego na-emechi ọnọdụ n'otu ụbọchị. Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, mgbe itinye ego na ebuka ọdịnala na ogologo oge, ị na-atụ anya ị ga-ebili ebili nke mgbanwe dị na ahịa.
N'ụzọ dị iche, ndị ahịa ụbọchị na-achọ nsogbu n'ahịa, naanị na ha ihu oma. N'iburu n'uche mmeghari ego dị mkpirikpi nke ihe dị iche, ọdịiche na-abịa na ohere iji meghee azụmaahịa maka nkeji ma ọ bụ oge. Mgbanwe ndị ọzọ na - eme n’ọnụ ego, n’ime otu ụbọchị, ọ ga - enyekwu ohere ka onye ahịa nwee uru.
Obere Oke, Oke Oke
N'ụbọchị ịzụ ahịa, ị na-achọ irite uru site na obere mgbanwe dị iche na ọnụ ahịa ego. Nke a bụkarị ikpe mgbe ị na - azụ ahịa mmiri mmiri dịka gas, mmanụ, ọla edo, ma ọ bụ indices. Ahịa ndị dị otú a na-agbanwekarị na ọkwa dị ala.
Iji bulie uru, ụbọchị ndị ahịa na-eme bụ itinye ọtụtụ azụmaahịa ụbọchị niile, n'agbanyeghị, ọ bụghị azụmaahịa ọ bụla ga-aba uru. Na ngwụcha, na njedebe ụbọchị azụmaahịa, ịchọrọ inwe mmeri mmeri karịa 50% - opekata mpe na usoro mmụta, agbanyeghị.
Ọ bụ ya mere ndị ahịa ụbọchị ji agba mbọ hụ na ha jiri usoro ha gosipụtara nke ọma - nke anyị na-ekpuchi n'okpuru.
Onye ahia ahia ubochi obula nwere ike ikpebi ime ihe nke putara na odi nke oma ma obu mepe nke ha. Ọ bụrụ n ’ịga ije nke abụọ, ị nwere ike wepu nnukwu oge were nyocha, nyochaghachi, ma mezue ya tupu ị tinye ezigbo ego na ya.
Ọtụtụ ndị mbido na-agba mbọ ịmụ ahịa ụbọchị site na atụmatụ dị adị ma mata ya nke ọma. Ka ị na-enwetakwu ahụmịhe, ị nwere ike ịnwa itinye mgbakwunye nke onwe gị iji rụọ ọrụ ahụ maka uru gị.
N'agbanyeghị ụzọ ị họọrọ, ị ga-elekwasị anya na ịgbaso usoro. N'ime ime nke a, nke a ga - enyere gị aka ịzụlite azụmaahịa siri ike na ịdọ aka ná ntị 'nkà ihe ọmụma', ma ọ bụghị n'olile anya ị nweta uru naanị na ịchọrọ.
Isi ihe dị na ya bụ ịrapara n’otu usoro site na mbido ma ghọta ya. Ọ bụrụ n’ịnwale usoro dị iche iche n’out oge, ị gaghị ama onye na-arụrụ gị ọrụ na ndị na-efu gị ego.
Kedu akụnụba ị nwere ike ahia na azụmaahịa ụbọchị?
Otu onye ahia ụbọchị nwere ohere ịnweta ọtụtụ akụ na ọgbakọ dị iche iche. Nke a na - enye gị ohere dị ukwuu ịzụ ahịa na ngwa ego dị iche iche n'oge ọ bụla.
N'okpuru ebe a, anyị tụlere ụfọdụ akụ akụ na ụba azụmaahịa na ụbọchị azụmaahịa.
Ahịa bụ kpakpando nke ụbọchị ahia. Ahịa bụ otu n'ime klas kachasị baa uru, n'ihi na ọ na-adịkarị na mbara ala. Tradingzụ ahịa n'ịntanetị saịtị ga-enye gị ohere ịbanye na ahịa ngwaahịa dịka NYSE, LSE na TSE.
Offọdụ n'ime ha ga-ebikwa ahịa ndị na-adịchaghị mmiri mmiri. Ndị a gụnyere mgbanwe dabere na Indonesia, Hong Kong, South Africa, ma ọ bụ Australia.
Indices bu otu ndi mmadu nke ndi ulo oru ego choro dika ulo ohia ma obu ulo oru. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-arụ ọrụ ndeksi iji nyochaa arụmọrụ nke mgbanwe ngwaahịa sara mbara.
Ndị na-ere ahịa ụbọchị Indice ga-atụgharị uche na mmegharị ọnụahịa na ndepụta aha ngwaahịa ndị a - dịka ha ga-eji klaasị akụ ndị ọzọ ọzọ. . Ihe omuma ama ama nke indices bu FTSE 100, Dow Jones na NASDAQ 100.
Ahịa ahia na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti ndị ahịa ụbọchị. Nke ahụ kwuru, ọ dịghị ihe na-egbochi onye mbido ịzụ ahịa ndị a. Ngwaahịa gụnyere ike dị ka mmanụ na gas, ọla dị ka ọla edo, ma ọ bụ ọbụna ngwaahịa ndị ọrụ ugbo. Ahịa ngwaahịa na-emeghe 24 awa kwa ụbọchị ma na-enye ọtụtụ ego.
Ego Ego Gbanwere
A maara nke ọma dị ka ETFs, klas a na-enyere ndị ahịa aka ịkọ otu akụ ma ọ bụ nkata nke akụ na-enweghị nsuso onye nwe ya. A na-ahụta ihe ndị a maka ndị mbido, ebe ha na-enye mmiri dị ukwuu, ọnụego mmefu dị ala, na ọtụtụ ntụgharị.
Forex ma ọ bụ mba ọzọ na-agbanwe ahia bụ mgbanwe nke ego abụọ iji nweta uru. N'adịghị ka ahịa ahịa, ebe ị na-azụ ahịa otu ngwaahịa, na Forex, ị zụrụ otu ego wee ree ọzọ.
Dika a na-akwụ ego ego na nke anọ, ọ bụrụgodi obere nkeji nwere ike ime ka onye ahịa nweta uru. Ka o siri dị, Forex abụghị ihe ijuanya na otu n'ime ngalaba ama ama nke ụbọchị ahia.
Ihe mgbakwunye dị ọhụrụ na azụmaahịa ụbọchị, azụmaahịa crypto na-enwetawanye mmụba n'etiti ndị na-etinye ego n'oge. Nwere ike ịzụ ahịa cryptos dị ka Bitcoin na Etherum, megide ego fiat.
Buru n'uche na a na-ahụta cryptocurrencies dị ka ihe siri ike na nnukwu ihe egwu, mana n'otu oge ahụ, na-ewetakwa ikike maka nnukwu uru.
Choo Niche ahia gi
Ọ bụ ezie na nnweta nke ụdị akụ dị iche iche doro anya bụ uru ọ bara n'ịzụ ahịa ụbọchị, ọ gaghịkwa ekwe onye ahịa azụmaahịa ọkachamara na ha niile. Kama nke ahụ, ị ​​ga-enwe ohere ka mma site na ịgbada otu ma ọ bụ mpaghara abụọ na ọkachamara na usoro ị họọrọ.
Maka onye na-azụ ahịa na-amu amu, ọ dị oke mkpa ịkọwapụta niche gị iji nweta ihe ọmụma na akụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịgbanwee uche gị site na ebuka gaa na ndeksi, wee mechie, ị ga-agbasi mbọ ike inweta nka na ahịa dị egwu.
Dị ka mpaghara ọ bụla ọzọ, itinye uche n'otu akụ, ma ọ dịkarịa ala na mbido, ga-aba uru - ebe ị nwere ike ịnakọta ozi ndị ọzọ ma nwalee usoro gị. O nwere ike ọ gaghị abụ echiche ọjọọ ịmụ banyere akụrụngwa ego ọzọ ozugbo ị tụkwasịrị obi na otu niche.
Day Trading na ihe Nlereanya
Anyị ekpuchiwo isi ihe nke ịzụ ahịa ụbọchị. Iji nye gị ntakịrị nghọta, anyị ga-egosipụtakwa ụfọdụ ụkpụrụ ndị bụ isi site n'enyemaka nke ụfọdụ ihe atụ.
Longga Ogologo na Akụ
Mgbe nyochachara nyocha gị, ị na-eche na ngwaahịa XYZ ga-abawanye uru na elekere ole na ole sochirinụ
Gaba na-egwu a "ịzụta iji" gị ngwaahịa ore ahia, na ahịa price $ 130.00
Mkpokọta osisi gị na azụmahịa a bụ $ 1000
Dị ka ị tụrụ anya, mgbe awa ole na ole gasịrị, ọnụahịa nke mbak XYZ rutere $ 131.30
Mmụba bara uru dị ugbu a na 1%.
N ’oke $ 1000 gị ugbu a, ị nwere uru ngụkọta nke $ 10
Place na-etinye usoro ire ere ma kpọchie uru.
Ọ bụ ezie na uru 1% nwere ike ọ gaghị eyi ka ọ bụ nnukwu ego, ọ dị mkpa icheta na ndị ahịa ụbọchị na-azụkarị nnukwu ego. Erite uru a naanị n'ime awa ole na ole. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ha tinye leverage nke 10x, isiokwu anyị ga-ekwu n'oge na-adịghị anya, uru a ga-aba ụba site na $ 10 na $ 100.
Shortga Akụ na ụba
Nchọpụta gị mere ka ọ pụta ìhè na ọnụahịa ABC mbak ga-adalata na elekere na-abịanụ
Jụọ onye na-ere ahịa ka ịdebe ire ere na ahịa ahịa $ 5
Na-ere mbak uru $ 2000
Ọ bụrụ na ọnụahịa ABC na-adaba na $ 4.50, mgbe ahụ ị nwere mbelata 1%.
N’osisi nke $ 2000, uru gị n’ahịa a bụ $ 20
Place na-etinye iwu ịzụta ma mechie azụmahịa iji kpochie uru a
Nke a na-egosi otu uru uru ga-esi kwe omume site na usoro dị mkpirikpi na ogologo - nke bụ echiche dị mkpa mgbe ị mụtara ịzụ ahịa ụbọchị!
Ewezuga ịzụ iwu na ire ahịa, enwere iwu ndị ọzọ ị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa. N'ihe atụ ndị anyị nyere n'elu, ọ nwere ike ịpụta na ozugbo etinyebere iwu izizi ma ọ bụ ire ere, onye ahịa ahụ na-echere ruo mgbe ahịa gbanwere wee tinyezie usoro mmechi na aka.
Agbanyeghị, ndị ahịa ụbọchị anaghị echere ịhụ ka ahịa si aga ma mepee ahịa ahụ na akụ. Kama nke ahụ, ha na-ahapụ ntuziaka ma ọ bụ iwu ndị ọzọ na onye na-ere ahịa na mgbe ọ ga-ere ma ọ bụ zụta. Mgbe ị na-azụ ahịa site na saịtị ịzụ ahịa n'ịntanetị, ịnwere ike ịtọ iwu ndị a n'onwe gị, yabụ ntuziaka gị ga-eme na akpaghị aka.
Enwere iwu ole na ole ị kwesịrị ịmara n'ime nke a mgbe ị mụtara ịzụ ahịa ụbọchị - nke anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Iwu nkwụsị na-efu bụ obere opekata mpe na ahia ahia iji nyere gị aka imebi ọghọm gị. Ezubere ha iji belata ọnwụ onye ahịa ma ọ bụrụ na itinye ego ha agaghị enwe nsogbu. Usoro nkwụsị-nkwụsị na-emechi azụmahịa mgbe ọnụahịa ahụ dara n'otu ebe, na-egbochi njedebe ọ bụla ọzọ.
Tọ ntọala nkwụsị na-efu maka 5% n'okpuru ọnụahịa ịzụrụ ga, dịka ọmụmaatụ, belata ọnwụ gị na 5%.
N'ihe atụ ọzọ, kwuo na ị zụrụ XYZ na $ 10 otu òkè.
Ozugbo ahia a gasịrị, ị na-etinye iwu nkwụsị-efu maka $ 8.
Ọ bụrụ na ọnụahịa ngwaahịa dara n'okpuru $ 8, a ga-erere mbak gị na ọnụ ahịa ahịa na-achịkwa.
Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ọnụahịa dara n'ihu, ka ọnwụ gị ga-akwụsị na nkwụsị nkwụsị pasent ị setịpụrụ. Agbanyeghị, n'ahịa azụmaahịa ụbọchị, ọ naghị ekwe nkwa mgbe niile na iwu nkwụsị ga-adị ire. N'ụzọ megidere nke ahụ, enwere ohere na ọnụahịa agaghị adaba site n'aka onye ahịa ọzọ.
Taa, ọtụtụ ebe nrụọrụ ahịa na ndị na-ere ahịa na-enye iwu nkwụsị-nkwụsị. Site n'ime nke a, onye na-ere ahịa na-enye mmesi obi ike na ahia gị ga-apụ na ọnụego nkwụsị ịtọla. Ọrụ a, agbanyeghị, ga-akwụ ụgwọ dị elu karịa.
Na ahia ubochi, uzo esi aputa abughi nani ihe ojoo ma uru ya bara. Youchọrọ ire ọnọdụ gị mgbe ha dị 'na ndu', ka ị ghara ichegbu onwe gị maka ị nweta uru gị.
Were ya na ị hụrụ usoro ịrị elu na ngwaahịa wee kpebie imeghe ọnọdụ dị ogologo.
Ọ bụrụ n ’ịtụ anya ịrị elu 10% site na ọkwa ya ugbu a.
N'okwu a, ị na-edozi usoro iji nweta uru nke 10% karịa ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na nke a emee, a ga-emechi uru gị na akpaghị aka na uru nke 10%
Machiini Ubochi ahia gi
Ma nkwụsị nkwụsị na iwu na-enweta ego na-enyere onye na-ere ahịa aka ịzụ ahịa na akpaaka. Ebe ndị a nọ, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara iji nlezianya nyochaa akụ ahụ oge ọ bụla kwa ụbọchị.
Nke a ga - enyere gị aka izere 'ịche echiche nke abụọ' mkpebi gị, dị ka ọ dị n'ụwa ịzụ ahịa, ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịma ihe iseokwu ahụ. Site na nkwụsị nkwụsị na iwu na-akwụ ụgwọ, a kọwara n'ụzọ doro anya ihe ize ndụ-na-ụgwọ ọrụ, ị makwaara ihe ị ga-atụ anya ọbụlagodi tupu azụmahịa ahụ emechie.
Iwu ndị a na-arụ oke ọrụ na ịme azụmaahịa ụbọchị ka ọ bụrụ mmega ahụ na-aga nke ọma.
Mụọ Daybọchị ahia na ntinye
N'okwu dị mfe, itinye ego bụ ikike iji azụmaahịa nnukwu ọnọdụ ya na obere ego. Dị ka ndị ahịa ụbọchị na-eme ọtụtụ itinye ego n'otu ụbọchị, ịchọrọ nkwado nke nnukwu bankroll. Na leveraging, ị na-nnoo agbaziri ego site na ore gị.
Na tiori, itinye ego emetụtaghị uru ma ọ bụ mfu gị nwere - opekata mpe na pasent. Kama, ọ na-ebelata ego ole azụmaahịa ga-enwerịrị.
Iji maa atụ, onye na-azụ ahịa chọrọ ịzụrụ 100 mbak nke ngwaahịa na $ 20 kwa otu ga -achọ ịhapụ $ 2,000. Ma, site na ntinye nke 10x, naanị $ 200 chọrọ n'ihu.
Dị ka ndị dị otú a, onye na-azụ ahịa ụbọchị ọkachamara na-ele leverage dị ka ihe ohere.
Leverage nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya ịghọta mgbe ị mụtara azụmaahịa ụbọchị, yabụ na anyị akọwapụtala ihe atụ ọzọ n'okpuru.
Ka anyị kwuo uru nke ngwaahịa mgbe mmeghe bụ $ 5000
Kama ịkwụ ụgwọ zuru ezu, ịnwere ike itinye ihe mgbakwunye nke 5: 1
Nke a pụtara na $ 5 ọ bụla bara uru n'ezie, ị ga-etinye naanị $ 1 ​​nke isi obodo gị.
N'ihi ya, maka ọnọdụ a, ị ga - achọ $ 1000 iji mepee ya.
Ga-erite uru na dum ahia, ma obughi nani maka ihe i tinyere. Uru bara uru, itinye n'ọrụ na-akwado gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị tufuo, ọghọm gị ga na-akawanye njọ.
Ihe ize ndụ nke Day Day na leverage
Mgbe ị na-azụ ahịa ihe, ịkwesịrị ịmara maka usoro oke. N'ihe atụ dị n'elu, ị nwere ike mepee iwu ahụ na $ 1000 n'agbanyeghị na ọnọdụ achọrọ $ 5000. I mere nke a site n ’itinye ego nke 5: 1.
Mgbe ị mepere ahia ahụ, a ga - ewepụ $ 1000 wee debe akaụntụ gị n'akụkụ akaụntụ gị. N'okwu dị mfe, enwere ike ịtụle oke a dị ka nkwụnye ego anaghị akwụghachi. Ọ bụrụ na ahia ahụ na-emegide gị, ị ga-atụfu oke ego a.
N'okwu a, ntinye ahụ bụ 5: 1, nke pụtara na oke gị dị na 20%. Ọ bụrụ na ahịa ga-aga megide gị site na 20%, mgbe ahụ ị ga-atụfu oke $ 1000.
Dabere na ntinye ego eji arụ ọrụ, ego a ga - adị iche. Ọ bụrụ n'ịhọrọ 10x, naanị ihe ị ga - eme bụ igbunye 10% nke oke gị ma tufuo otu ihe ahụ. Ihe mgbochi na leverage na-achịkwakarị mgbochi nke obodo ị dabere na ya, yana klas akụ bara ụba ịchọrọ ịzụ ahịa.
Gwọ na isslọrụ na Daybọchị ahia
Tradingbọchị ahia na-achọ ka ị na-azụ ahịa site na onye na-ere ahịa. Dị ka ndị dị otú a, saịtị ndị na-ere ahịa na-akwụ gị ụgwọ ụfọdụ na ọrụ iji kwado ọrụ ị na-eme.
N'ozuzu, e nwere ụgwọ abụọ, ọkachasị, ị kwesịrị ịma.
mgbasa akọwapụtara dị ka ọdịiche dị n'etiti ọnụ na ịrịọ ma jụọ ahịa nke ihe onwunwe. Nke a bụ ihe na - enweta uru maka onye na - azụ ahịa - n'agbanyeghị etu ngwa ahịa ahụ si aga na obere oge.
Na ahia ụbọchị, a na-egosi mgbasa ahụ “pips”Mgbe ị na-eji CFDs na“ isi ihe ”na mgbasa ịkụ nzọ. Nke a nwere ike inwe mgbagwoju anya, yabụ kama, a na-enyocha mgbasa ahụ n'ogologo pasent, nke dị mfe iji gbakọọ. Ọ dị mkpa ka ị tụlee mgbasa mgbe ị na-azụ ahịa n'ihi na a na-atụle uru gị naanị mgbe uru gị kpuchiri ya.
Lee ihe atụ a:
Ọnụ ego ịzụrụ nke ngwaahịa XYZ bụ 100.00
Ọnụahịa ere nke otu XYZ ngwaahịa bụ 100.50
Onu ogugu di iche ma obu mgbasa gbasaa na 0.5%
Ọ bụrụ na onye ahịa rịọ XYZ, ma kwụọ $ 100.50, ị nwere ike ịrịọ naanị $ 100.00
N'okwu a, ịkwesịrị irite uru nke opekata mpe 0.5% iji mebie.
Ọnụ ego ọ bụla karịrị nke a ka a ga-agụ dị ka uru.
N'ụbọchị ịzụ ahịa, mgbasa ahụ nwere ike ịbụ onye ọjọọ. Ebe ndị ahịa na-achọkarị mgbanwe ngbanwe, mgbasa ahụ nwere ike iri obere uru ị ga - enweta na azụmaahịa ahụ. Ya mere, ọ dị oke mkpa na ịhọrọ ebe nrụọrụ azụmaahịa na-agbasa agbasa.
Yana mgbasa, ahịa ga-akwụ ụgwọ isslọrụ na ore ahia. Otú ọ dị, taa, ịnwere ike ịchọta nyiwe na-enye ahịa "efu-ọrụ". N'ebe ndị a, ị ga-elekwasị anya na ijide n'aka na mgbasa ahụ anaghị elo uru gị - ebe ị nwere ike ịchọpụta na ọ dị ntakịrị elu iji gbochie ọrụ 0%.
Commlọ ọrụ Broker nọkwa na percentages ka ọnụọgụ ahụ ga-adịgasị iche dabere na nha ahia gị. Ọzọ, cheta na a ga-ebo gị ụgwọ ọrụ maka ma ịzụrụ na ire azụmaahịa ya.
Mụta ahia ụbọchị - Kachasị mma Brokas nke 2021
Yabụ ugbu a anyị ekpuchila isi ihe kachasị mkpa ị kwesịrị ịma mgbe ị na-amụ ihe ụbọchị trading, ị kwesịrị ugbu a na-amalite na-eche echiche nke Broki saịtị na ị chọrọ iji.
Iji nyere gị aka n'ụzọ, n'okpuru ị ga-ahụ nhọrọ nke ndị na-ere ahịa ụbọchị kachasị mma nke 2021.
2. Capital.com - Zlọ Ọrụ Zero na Ultra-Low Spreads
3. AVATrade - Ego nnabata 2 x $ 200
Site na ikikere usoro iwu gafere mpaghara ise, AVATrade na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa, gụnyere Forex na cryptocurrencies. Ọ bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na-azụ ahịa weebụsaịtị ma na-aga n'ihu na-achịkwa ụlọ ọrụ ahụ. Maka ndị mbido, akwụkwọ ntuziaka na saịtị ahụ ga - enyere gị aka ịghọta azụmaahịa ụbọchị ma mụta site na atụmatụ siri ike.
4. EuropeFX - Nnukwu ego na ọtụtụ FX Trading Platform
Tradingbọchị ahia na-abata ọtụtụ ihe egwu. Kwesịrị ijide ụfọdụ mkpebi gị na ịdị njikere ibute nsonazụ gị. Maka ndị mbido, isi ihe bụ ịmụ ihe dịka ị nwere ike ma kwadebe onwe gị maka enweghị atụ.
Anyị na-atụ anya na anyị na-amụta ụbọchị ahia ndu nyere gị nnyocha nke ihe ọ na-ewe ka ụbọchị ahia akụ. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ọ bụ gị ka ịmatakwu ihe. Mgbe ejiri ikike na akụrụngwa kwesịrị ekwesị, ịnweta mmesapụ aka site na azụmaahịa ụbọchị ga-ekwe omume.
Ruo awa ole ka ị nwere ike ịmeghe ọnọdụ n'ahịa ụbọchị?
Ndị ahịa ụbọchị na-emeghe ma mechie azụmahịa n'ime otu ụbọchị. Nke a pụtara na ha na-emeghe ahia ahụ naanị awa ole na ole. Ọ bụrụ na akụrụngwa ahụ na-ebuwanye ibu, ndị ahịa nwere ike ịhapụ azụmahịa mepere maka ihe karịrị sekọnd ole na ole ma ọ bụ nkeji.
Ego ole ka ị ga - enweta site n'ịzụ ahịa ụbọchị?
Ego ndị ahịa ụbọchị na-adabere na onye ahịa ahụ, yana ihe ndị dị ka ọrụ na leverage.
Kedu ihe ịgbasa pụtara na azụmaahịa ụbọchị?
A na-agbasa mgbasa ahụ dị ka ọdịiche dị n'etiti ịzụ na ire ere nke ngwaahịa. Ọ bụ ego ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ ka ha nweta ego. Na tighter mgbasa bụ, ndị ọzọ uru oke ị na-eme.
A na-achịkwa saịtị azụmaahịa ụbọchị?
Ee, a na-achịkwa usoro niile nke azụmaahịa ụbọchị. Agbanyeghị, ọ bụghị saịtị niile dị. Dị ka ndị dị otú a, ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-ahọrọ usoro ikpo okwu a na-achịkwa nke onye na-enye ikikere ikike a na-achịkwa. All saịtị na-ere ahịa anyị kwuru na ntuziaka a na-achịkwa ụdị ahụ.
Ego ole ka onye ahia ụbọchị nwere ike iji rụọ ọrụ?
Ihe dị iche iche na-ekpebi ikike ịgba ụgwọ, ọnọdụ, ngwa ọrụ ego yana amụma onye na-ere ahịa. Mba dị iche iche nwere leverage dị iche iche n'otu ebe maka akụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, UK nwere njedebe 30: 1 na ego, 2: 1 maka crypto, yana 20: 1 maka exotics.
Kedụ ka m ga - esi tinye ego na azụmaahịa ụbọchị?